Ku rakibida Paquet Tracer 5.3.3 oo Isbaanish ah Ubuntu 13.04 (32 jajab) | Laga soo bilaabo Linux
Ku rakibida Paquet Tracer 5.3.3 Isbaanishka Ubuntu 13.04 (32 jajab)
Packet Tracer waa jilitaanka shabakadda isdhexgalka iyo aaladda barashada macallimiinta iyo ardayda Cisco CCNA. Qalabkani wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay abuuraan jawi isku xirnaanta shabakadaha, qalabaynta qalabka, geliyaan xirmooyin, isla markaana ay u ekeysiiyaan shabakad leh matalaad badan oo muuqaal ah.
Badeecadani waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo badeecad waxbarasho oo soo bandhigaysa isku xidhka khadka amarka ee qalabka Cisco si loogu tababaro loona ogaado barashada.
Tani waa tabarucaad ay sameeyeen Luis Adrián Olvera Facio iyo José Luís Olvera Facio, iyagoo sidaas ku noqday guuleystayaasheena todobaadlaha ah:La wadaag wixii aad ka ogtahay Linux«. Hambalyo Luis iyo José!
Marka hore waxaan soo dejineynaa faylasha soo socda:
Raad-raac Baakad 5.3.3 Tarjumaada Isbaanishka
Marka feylasha la soo dejiyo, waxaan sameyn doonaa waxyaabaha soo socda:
Waxaan fureynaa terminal (Ctrl + Alt + T) waxaanan aadeynaa halka feylasha lagala soo degay, waxaan u maleyneynaa inay ku jiraan galka Desktop-ka, halkaas oo aan ku siineyno ogolaansho fulin feylka oo wata magaca pt.bin iyadoo amarka soo socda:
Desktop cd && sudo chmod 777 pt.bin && ./pt.bin
(Haddii feylku ku jiro faylka soo dejinta, si fudud u beddel Desktop-ka oo u soo dejiso)
Iyada oo terminalku wali xiran yahay, kaliya aqbal shuruudaha liisanka oo rakibaya baakadka ayaa lagu rakibi doonaa, hadda waxaan nuqul ka qaadan doonnaa faylka sp.ptl wadada soo socota / usr / local / PacketTracer5 / LANGUAGES oo leh amarka soo socda
Hadda waxaan xiri karnaa terminal-ka oo aan ka furi karnaa baakadka raadiyaha (menu-ka ugu muhiimsan) Dhigista Cisco Packet Tracer, ka dib waan fureynaa isla markaana markaad gasho gudaha, waxaan aadeynaa liiska ugu sarreeya ee aagagga Xulashada / Xulashada (Ctrl + R) isla markiiba wuxuu furaa Daaqad dhanka hoose ku taal ikhtiyaar ku leh "Xullo Luqad" si fiican, hadda waa inaad doorataa ikhtiyaarka spt.ptl oo aad aqbashaa badhanka Luqadda Beddelka
Waxaan mar labaad bilaabaynaa Baakad-baakidh waxayna ku noqon doontaa Isbaanish. Xusuusnow in dhaqamada aad sameyso lagu keydin doono galka keydka ee ku jira galkaaga PacketTracer-kiisa gaarka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Ku rakibida Paquet Tracer 5.3.3 Isbaanishka Ubuntu 13.04 (32 jajab)
Willem Ponce Ramal dijo
Aad baad u mahadsantahay !!!!!!!!
Jawaab Willem Ponce Ramal
Ganial maxaa yeelay waxay la jirtey nooca 5.0 mana jirin waddo loo furo noocyo kale oo noocyo kale ah si loo arko haddii ay shaqeyneyso iyo in kale
Jawaab Santi Hoyos
Ricardo Shimbir dijo
Si fiican ayey aniga ila noqotay, waxaan raacay tillaabooyinka oo dhan wax walbana way saxnaayeen 😀
Jawaab Ricardo Bird
Great compadre Aad ayaan ugu faraxsanahay, way fiicantahay inaad sifiican uqabsatay.
Jawaab Luís Adrián Olvera Facio
Waxaan ku guuleystey inaan rakibo baakad raadiye ah Ubuntu 13.04 64 jajab laakiin dhibaatada i haysata ayaa ah inaan furi karin faylasha pka, waxaa ii soo diray macallinkayga waxaana lagu abuuray isla nooc ka mid ah baakadaha baakadka ee aan haysto, kaas oo waa 5.3.3 si toos ah looga soo dejiyey websaydhka cisko tan iyo markii aan ahay arday ka tirsan akadeemiyadda
Haddii qof uu haysto sharaxaad uu ku yiraahdo "bug" waxaan u maleynayaa inay tahay inaan jeclaan lahaa xoogaa macluumaad ah.
waad ku mahadsantahay salaanta chile
Ku jawaab daskmond
Ma aqaano inaad ii soo diri karto mid ka mid ah dhaqamada ay cayayaankaasi kugu tuurayaan sidaa darteed waan ku caawin karaa. Waan ka xumahay dib udhaca ma aanan arkin qoraalkaaga.
uur leh dijo
Weyn si fiican loo sharaxay. Si fiican ayaan u rakibey barnaamijka.
Aad baan u mahadsan yahay
Ku jawaab hooyada
Mahadsanid, wey ila fiicantahay aniga!
Joan Delgado dijo
Saaxiib anigu ma furi karo waxay soo baxeysaa in la rakibay laakiin ma furmayo OS ubuntu 13.04 64 jajab miyaad i caawin kartaa? salaan ka timid Ecuador?
Jawaab Joan Delgado
Waad salaaman tihiin saaxiib, iga raali noqo dib u dhaca aanan arkin barta maalmahan. Waxaad ku ridi kartaa amarka soo socda terminal oo ii sheeg macluumaadka aad hesho.
/ usr / deegaanka / PacketTracer5 / packettracer
Jawaab Adrián Olvera
Gian burga dijo
Aad u fiican! Mahadsanid!
Jawaab Gian Burga
Ugu dambayntii waxaan xal u helay dhibaatadan.
casharrada kale aniga iima aysan shaqeysan
Waa wax lagu farxo inay ku anfacday, salaan.
Jawaab Adrian Olvera
Aad baad u mahadsan tahay, si cajaa'ib leh ayey ii adeegtay
Farxad ma aha in la caawiyo.
Jose Canchola dijo
Waad ku mahadsantahay casharka. Laakiin ma furi karo barnaamijka.
Rakibaadda si sax ah ayaa loo qabtay, laakiin markaan tagayo dashka oo aan doorto baakadka raadraaca, ma furmayo oo muddo ayaan isku dayayay. Xaqiiqdii waan iska fogeeyay oo dhowr jeer ayaan dib u cusbooneysiiyay.
Jawaab Josue Canchola
Waad salaaman tahay saaxiib, ma i siin kartaa macluumaad ku saabsan noocaaga Ubuntu, haddii ay tahay 64 ama 32 iyo waliba tan ku dheji
Nuqul waxaad hesho, laga yaabee inay tahay in qaarbaa maqan yihiin. ku tiirsanaanta ama oggolaanshaha fulinta.
Waxaan leenahay isla dhibaatada dugsiga hoose waxaan isku dayaa inaan furo laakiin ma socdo oo markaan amarka aad sheegto aan siiyo waxaan helayaa waxyaabaha soo socda waxaad u maleysaa inaad i caawin karto
"Bilaabashada Baakad-baare 5.3"
ubuntu-na waa 64 bit miyaad u malaynaysaa inay taasi tahay dhibaatada?
Hello Raul, dhowaan saaxiibkeen Cristian Aldair Zaldaña wuxuu dhibaatadan ku qabay nooca 64-bit, oo uu ku xaliyay adoo ku rakibaya maktabadaha 32-bit amarka soo socda:
sudo apt-hel rakib ia32-libs
wax ku biirinta aad u wanaagsan ku rakib sida casharku sheegayo, aad baad u mahadsantahay !!
Waa lagusoo dhaweynayaa compadre
Intee le'eg yihiin ...
Jawaab Javier Mora
Carlos Raul dijo
waxaad tahay nin dildilaac mahadsanid
Ku jawaab Carlos Raul
Waad soo dhawaynaysaa, Carlos! Qabsoon! Bawlos.
Waad salaaman tihiin wiilal wanagsan oo rakibay barnaamijka oo sifiican ayuu usocdaa laakiin wuxuu isku dayay inuu furo feyl macalinkaygu udiray si uu usameeyo mana furo falkaas fariinta uu bixinayo waa tan soo socota ... .. Faylka / guriga / eidelman / Desktop / SHAQAALAHA SHAQAALAHA 2 / shaybaarka 1.pka ayaan la jaan qaadi karin noocaan ah Packet Tracer. , Waxaan u maleynayaa in qaar ka mid ah ay horay u soo martay pro fa haddii aad i caawin karto, horay ayaan kuugu mahadnaqayaa, waxaan u beddelay Lunux, waa wax fiican: 3…. PS .. fadlan ha iga dhigin inaan ku noqdo daaqadaha TT…> 3
mahadsanid, way fiican tahay.
Ku jawaab joornaal cano
Milan faleebo dijo
Waxay u shaqeysaa timaha, waxaan hadda ku rakibay ubuntu 14.04. Wax ku darsasho weyn
Jawaab Milan Gotera
Dhibaatada i haysata waa khadkan
ayaa leh: cp: ma fulin karo `` stat '' ka ah "sp.ptl": Faylka ama galka ma jiro
Runtii halkaasna kama jiraan buugga meesha aan ka furay .zip faylka qaarkood .ptl
Ku jawaab andres giraldo
Hubi in meesha aad ka fulineyso amarka uu yahay galka aad ka soo dejisay faylka sp.ptl, waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa garaaf ahaan amarka gksudo nautilus.
C. Andrés Giraldo dijo
Waxaan ku jiraa diiwaanka aan ka soo dejinayo feylka fariintaasina way sii socotaa.
Jawaab C. Andrés Giraldo
Haddii faylka uusan si macquul ah u jirin ma awoodid inaad nuqul ka sameysatid, ma nuqulan kartid feyl aan jirin. Hubi haddii aad furatay ZIP qalad ah ama haddii faylka sp.ptl uu jiifo meel kale.
Aad u wanaagsan, ayaa loo adeegay markii ugu horeysay. wax ku biirinta wanaagsan aadna umahadsanid saaxiib 🙂
Jaren alexander dijo
Waad ku mahadsan tahay tabarucaadkaaga, waan ka daalay inaan ku wareego oo aanan awoodin inaan rakibo baakad jaakad ah, tabarucaadkaagu aad buu u wanaagsan yahay
Jawaab Jaren Alejandro
Aad u fiican. Horay ayaa loogu rakibay lint mint 17. Waad ku mahadsantahay wax ku biirinta !!!
Galab wanaagsan, waxaan raacay talaabo talaabo waana ku guuleystey inaan rakibo, laakiin ma socoto. Mahadsanid
Jawaab David Rojas
William Placencia dijo
Maalin wanaagsan. Dhibaatadu waxay tahay anigu ma wadi karo barnaamijka, horey ayaa loo rakibay, waan aqbalay markaan maamulona way xirmaysaa, waxaan hayaa nooc yar oo AMD 64 ah.
Jawaab Guillermo Placencia
Aad u faa'iido badan! Aad baad u mahadsantahay!
10 amarro ah in lagu maareeyo keydka macluumaadka MySQLAdmin
Debian 7 "Wheezy" iyo QEMU-KVM (II) finalka